ဝူဟန်သံသယရှိသူ ဝေဘာဂီဆေးရုံကိုရောက်သွားရင် ပိုမဆိုးကုန်ဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – Askstyle
ဝူဟန်သံသယရှိသူ ဝေဘာဂီဆေးရုံကိုရောက်သွားရင် ပိုမဆိုးကုန်ဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
“ဝူဟန္ေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသားေတြကို ျပန္သြားေခၚဖို႔ အတြက္က် ေန႔ေ႐ႊ႕ ညေ႐ႊ႕နဲ႔၊ ဟင္ .. ကိုယ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေဖးမမႈမရွိပဲ အတၱႀကီးစြာနဲ႔ ျပန္မလာနဲ႔ဘာညာနဲ႔ ဆစရက ေကာမန႔္ေတြ ကရွိေသးတယ္။ ” အခုက်ေတာ့ China southern airline ေလယာဥ္ႀကီး အစင္းလိုက္ကို ရက္ရက္ေရာေရာ ကို ေပးဝင္လိုက္ၾကတာ။ အဲ့လိုပါဆို. တကယ္ဆို ေရာဂါပိုး သံသယရွိရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားလဲျဖစ္တယ္ဆို အဝင္မခံပဲေလယာဥ္နဲ႔ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္ရမာဟုတ္ဘူးလား
လူနာကိုေတာင္ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံပို႔တယ္တဲ့။ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွာရွိတဲ့လူနာေတြက ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းတဲ့အားနည္းေနတဲ့ သူေတြေလ။ ပိုဆိုးကုန္မွာမဟုတ္ဘူးလား။ လိုက္မမွီေတာ့ဘူးကြယ္ ဆိုက္ကားေလးနဲ႔ပတ္ေခၚၿပီး နည္းနည္းေလာက္ရွင္းျပၾကပါ ကြၽန္မကို” ဆိုျပီး ေျပာလာပါတယ္။
“ဝူဟန်ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသား ကျောင်းသားတွေကို ပြန်သွားခေါ်ဖို့ အတွက်ကျ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့၊ ဟင် .. ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ဖေးမမှုမရှိပဲ အတ္တကြီးစွာနဲ့ ပြန်မလာနဲ့ဘာညာနဲ့ ဆစရက ကောမန့်တွေ ကရှိသေးတယ်။ ” အခုကျတော့ China southern airline လေယာဉ်ကြီး အစင်းလိုက်ကို ရက်ရက်ရောရော ကို ပေးဝင်လိုက်ကြတာ။ အဲ့လိုပါဆို. တကယ်ဆို ရောဂါပိုး သံသယရှိရင် တရုတ်နိုင်ငံသားလဲဖြစ်တယ်ဆို အဝင်မခံပဲလေယာဉ်နဲ့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရမာဟုတ်ဘူးလား
လူနာကိုတောင် ဝေဘာဂီဆေးရုံပို့တယ်တဲ့။ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာရှိတဲ့လူနာတွေက ကိုယ်ခံအားကျဆင်းတဲ့အားနည်းနေတဲ့ သူတွေလေ။ ပိုဆိုးကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ လိုက်မမှီတော့ဘူးကွယ် ဆိုက်ကားလေးနဲ့ပတ်ခေါ်ပြီး နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြကြပါ ကျွန်မကို” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။